Asa An-Terivozona Ho An’ilay Vehivavy Namerina Nandefa Tety Anaty Serasera Ny Fanakianana Ny Zavatra Nataon’i Rosia Tany Okraina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Febroary 2016 8:22 GMT
Heloka hitan'ny fitsaràna iray tao Yekaterinburg ho nataon'i Yekaterina Vologzheninova, 46 taona, ny “fanimbàna endrika ny lamina politika” sy ny “fandranitana fankahalàna” tamin'ny namerenany nandefa tao amin'ny tambajotra sosialy Rosiana VKontakte, na nitiavany ireo zavatra manakiana ny fakàn'i Rosia an'i Krimea sy ny fifandonana tao Dumbas. Araka ny voalazan'ny Grani.ru, tambajotram-baovao Rosiana, nanome didy ihany koa ilay mpitsara ny hamotehana ny solosaina findain'i Vologzheninova.
Ny Desambra 2014 i Vologzheninova no voalohany natonin'ny mpampihatra lalàna, rehefa nikaroka ny toeram-ponenany ireo manampahefana avy amin'ny Kaomity Rosiana Mpanadihady ary nanagihy ny solosaina findainy sy fitaovany hafa. Taty aoriana dia nalaina am-bavany izy ary nampangaina ho “nihantsy fankahalàna sy herisetra” tamin'ny alàlan'ireo lahatsoratra nalefany na naveriny nalefa tety anaty aterineto, narahan'ny fitanisàn'ireo manampahefana ny toko faha-282 amin'ny lalàna Rosiana momba ny heloka bevava.
Ny vontoaty izay notazonin'ilay Kaomity Mpanadihady dia ahitàna ireo lahatsoratra nataon'i Vologzheninova tao amin'ny VKontakte, miaty rohy mankany amin'ireo zavatra momba ny hetsika politika tany Okraina nitranga tsy ela akory izay, tafiditra amin'izany ireo hetsi-panoherana Euromaidan sy ny tohiny. Namerina nandefa ireo tononkalo sy lahatsoratra marobe izay amin'ny ankapobeny dia faritana ao anatiny ho toy ny “andevo ara-batana sy ara-tsaina” ireo Rosiana. Niampanga manokana an'i Vologzheninova ho nizara rohy mankany amin'ireo fanadihadiana sy fandaharan'ny fahitalavitra momba ilay hetsika tany Okraina ny mpampanoa lalàna, isan'ireny ny “The Winter That Changed Us” (Ilay Ririnina Nanova Antsika) sy ilay fandaharana anaty fahitalavitra “Brave Hearts,” tamin'ny fanindriana hoe ireo zavatra naveriny nalefa dia “mihantsy fankahalàna sy herisetra amin'ireo solontena Rosiana manampahefana sy amin'ireo Rosiana mpirotsaka an-tsitrapo izay niady teo anilan'ireo milisy tany Okraina Atsinanana.”
Notsindrian'i Roman Kachanov, mpisolovava an'i Vologzheninova, fa namerina nandefa fotsiny ny zavatra navoakan'ny hafa tety anaty aterineto ny olona arovany, ary tsy nanisy fanovàna na kely aza tamin'izy ireny, na naneho hevitra momba azy ireny. Ny Janoary 2015, nilaza tamin'ny Open Russia i Vologzheninova izy tenany fa tsy nihevitra mihitsy izy hoe ny vontoaty naveriny nalefa dia niaty fihantsiana “fankahalàna eo amin'ny firenena na fanaingàna hanao mahery fihetsika” sy hoe ny nahaliana azy dia ny “fomba fijery hafa tamin'izay nasehon'ny fantsona federaly Rosiana.” Ny “manampahaizana mpandalina momba ny toetra sy ny fiteny ao amin'ny fitsaràna,” na izany aza, dia nitarika ny mpitsara hiandàny amin'ny fijerin'ny mpampanoa lalàna.
Lazain'i Kseniya Kirillova, mpamakafaka hevitra, raha nanoratra ho an'ny kasparov.ru, tranonkalan'ny mpanohitra tsy miankina, fa noho ny sata maha-reny tokantena azy sy ny fanentanana ny vahoaka niparitaka be, dia toa noferana fotsiny ho 320 ora ny sazin'i Vologzheninova hanao asa an-terivozona ho an'ny fiarahamonina raha tokony ho sazy famonjàna. Mahafaoka endrika asa ara-batana sasantsasany matetika ny asa ho an'ny fiarahamonina (ohatra, famafàna làlana) ho an'ireo sampan-draharaha mpamoaka didy, ho toy ny solon'ny sazy ara-pitsaràna hafa, tahàka ny fanibohana am-ponja.
Tsipihan'ny fanehoankevitr'i Kirillova tamin'ilay tranga ireo fanitsakitsahana maro nitranga tamin'ny dingam-pitsaràna natao, toy ny fampiasàna tsy ara-drariny ny fandalinana ny fiteny (izay ny manampahaizan'ny Sampandraharahan'ny Fiarovana Federaly irery ihany no nanao azy ary nafototra taminà sary sy lahatsoratra azo isaina amin'ny rantsan-tànana), ny fangalàrana ny sonian'ny voampanga tsy araka ny savaranonandon'ny fakàna azy am-bavany (araka ny nolazain'ny voampanga izy tenany mihitsy), ary ny fandàvana ireo vavolombelona marobe tamin'ilay raharaha mba hijoro hiaro ny fijoroany vavolombelona tany amboalohany.
Voamarik'i Kirillova ihany koa fa ny fiampangàna ao anatin'ilay raharaha dia mampibaribary zavatra betsaka momba ny ideolojia ao ambadik'ilay andianà fanenjehana ao Rosia atao amin'ireo kiana ety anaty aterineto. Amin'ny fiampangàna an'i Vologzheninova aminà fanambaràna miiba sy “fiampangàna entanin'ny fihetsehampo” momba ny “Rosiana manampahefana, ny raharaha politikan'i Rosia maoderina, ny filoha Rosiana amin'ny maha-olona ambony ao amin'ny firenena sy vatana misolo tena an'i Rosia” dia midika indrindra indrindra fa ofisialy ny maha- heloka bevava azy amin'izao fotoana izao, hoy i Kirillova manoratra. Raisina ho heloka bevava koa ny “Fifampiresahana na fifampizaràna fomba fijery”, indrindra raha mampiseho ny fihetsehampony ireo tafiditra amin'ilay fifanakalozana, hoy i Kirillova manamarika, tamin'ny fitanisàny mivantana avy ao anatin'izay voasoratra ao amin'ny fiampangàna.
Ny Desambra 2015, Vadim Tyumentsev, 35 taona, Rosiana iray bilaogera avy any amin'ny tanàna Siberiana ao Tomsk, dia voampanga ho nanao resaka fankahalàna ary niantso tety anaty aterineto ny hanaovana mahery fihetsika, ary nahazo sazy dimy taona an-tranomaizina noho ny namoahany lahatsary misy antso hanao hetsi-panoherana am-pilaminana sy fanehoankevitra manakiana ny fitsabahana ara-miaramila nataon'ny Rosiana sy ireo mpitaky fisintahana mpomba azy tany Okraina. Ny Novambra 2015, nambaran'ny “Russian Memorial Human Rights Centre” fa gadra politika i Tyumentsev, izay nandany efa ho ny 2015 manontolo tany am-ponja.
Ny Desambra 2015, fitsaràna iray tao Krasnodar no niampanga an'i Darya Polyudova, Rosiana mpikatroka, ho meloka nanao “fiantsoana vahoaka hisara-bazana sy hanao mahery fihetsika” tety anaty media sosialy (tafiditra tamin'izany ny famoahana sy famerenany namoaka ireo vontoaty tety anaty tambajotra sosialy) ka nanasazy azy roa taona an-tranomaizina.